पत्रकार रवि लामिछानेको बारेमा बरिष्ठ ज्योतिषीले यस्तो भनेका थिए | News Dainik
पत्रकार रवि लामिछानेको बारेमा बरिष्ठ ज्योतिषीले यस्तो भनेका थिए
news १० भाद्र २०७६, मंगलवार ११:५२ विविध प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौं । पत्रकार रवि लामिछानेको बारेमा बरिष्ठ ज्यो. दिपक सुवेदीले बताएको एक विशेष भिडियो क्लिपको लिंक न्यूज टिमलाई प्राप्त भएको छ । सगरमाथा टेलिभिजनको हलमा भइरहेको एक कार्यक्रममा आएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा ज्यो. सुवेदीले रविलाई यो घटनाले विशेष उपलब्धि दिने तर्फ संकेत गरेका थिए ।
विशेष ग्रह लिएर आएका व्यक्तिहरुलाई समय समयमा विभिन्न कष्ट, संघर्ष हुने तर त्यसले अन्ततः उसलाई ठूलै उपलब्धि दिने हुन्छ । दुःख पर्यो भन्दैमा डराउन हुँदैन सुवेदीले भनेका छन् । भगवान राम, कृष्ण, बुद्धको उदाहरण दिँदै उनले भनेका छन् भगवानहरुलाई पनि धेरै कष्ट भएको थियो ।
ज्योतिषी, माताहरुले जे पायो त्यही बोल्दिने गरेकोले आफूहरुलाई राहत भन्दापनि तनाब बढ्ने गरेको हुनाले त्यसरी नबोलिदिन रविको परिवारको सदस्यले ज्यो. सुवेदीसँग भनेको हुनाले आफूले रविको ग्रहको बारेमा विश्लेषण गरेको भए पनि ऐले हल्का पाराले नबोल्ने तर आफूले रविको बारेमा गरेको विश्लेषण नराम्रो नभएर राम्रो भएको ज्यो. सुवेदीले सो भिडियोमा बताएका छन् ।
ज्यो. सुवेदी राजनीतिक क्षेत्रलागायतको पक्षमा उनले गरेको भविष्यवाणी पुग्ने गरेका एक चर्चित ज्योतिषी हुन् । रविको बारेमा उनले बताएको भनाईको बारेमा जान्न चाहने व्यक्तिले यो भिडियोको क्लिप हेर्नसक्नु हुन्छ ।
अघिल्लॊ रवि लामिछाने छाड्न अदालतले दिएको १३ पृष्ठ लामो आदेशमा के छ ? [पूर्णपाठ]
पछिल्लॊ व्यापारीले सामानको मूल्यसूची नै राख्न मानेन्